Yemen oo shaaca ka qaaday in dowladda Imaaraatka ay dooneyso kala qeybinta Yemen. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Yemen oo shaaca ka qaaday in dowladda Imaaraatka ay dooneyso kala qeybinta Yemen.
On Jun 29, 2020 246 0
Iyadoo maalmihii lasoo dhaafay deegaano katirsan jaziiradda Saqadhara ee dalka Yemen ay ku dagaallamayeen ciidamo taabacsan xukuumadda Yemen iyo malleeshiayad ka amar qaata Imaaratka Carabta, ayaa waxaa jaziiradaas si buuxda ula wareegay Imaaraatka Carabta.
Mukhtaar Ar-Raxbi oo ah la taliyaha wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Yemen ayaa shaaca ka qaaday in Jaziiradda Saqadhra ay toos ula wareegtay dowladda Imaaraatka Carabta, ayna dooneyso iney ka jarto dalka Yemen intiisa kale.
Wuxuu intaa ku daray masuulkan in dowladda Imaaraatku ku howlantahay in jaziiradaas ay ka dhisto saldhigiyo milliteri oo waaweyn, iyadoo sheeganeysa buu yiri iney kaga hortageyso weeraro uga imaan kara dowladaha Qadar iyo Turkiga oo is kaashanaya.
19-kii bishan hadda socota ayaa malleeshiyaadka golaha kumeel gaarka ee Yemen, oo ay taageereyso Imaaraatka carabta waxay la wareegeen Saqdhar, kadib dagaal maalmo socday oo ay la galeen ciidamo katirsan xukuumadda Yemen.
Majiro wax war ah oo kasoo baxay dowladda Imaaraatka oo ku aadan eedeynta loo soo jeediyay, waxaase aad u muuqda marka laga hadlayo Yemen in Imaaraatku kala qeybiyeen dalkaas, ayna aas-aasteen malleeshiyaad iyaga si toos ah uga amar qaata.